जोसे लुइस सम्पेड्रो। उनका वाक्यहरू मार्फत उनका कामहरूको समीक्षा वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | मा अद्यावधिक गरियो 03/09/2018 19:10 | परीक्षण, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
फोटोग्राफी: (c) बेगोआ रिवास, एल सांस्कृतिकका लागि।
आजका विचारक र लेखकका लागि स्मृति हो जोसे लुइस सम्पेड्रो। केवल किनभने र खास गरी यसको साथ यसको सम्बन्धको कारण अरानजुज, म बस्छु जहाँ शहर। त्यसैले त्यहाँ जान्छ तिनीहरूको वाक्य मार्फत तिनीहरूको कामको समीक्षा, रचना प्रक्रियाको बारेमा केहि, सामान्य रूपमा लेख्ने बारेमा।
2 १० कार्यहरू र उनीहरूको रचनात्मक प्रक्रिया
2.1 स्टॉकहोम मा कांग्रेस
2.2 नदीले हामीलाई लिन्छ
2.3 अक्टुबर, अक्टुबर
2.4 Etruscan मुस्कान
2.5 पुरानो मरमेड
2.6 शाही साइट
2.7 समलि .्गी प्रेमी
2.8 पृष्ठभूमिमा समुद्र
2.9 एकल एकलका लागि क्वार्टेट
मेरो विश्वास छ कि लेखन भइरहेको छ सेल्फ माइनर, एक पुरातत्वविद् बन्नुहोस्, एउटामा सोच्नुहोस्, "छातीमा गहिरो जानुहोस्।"
साँच्चै, मलाई राम्रोसँग थाहा छैन किन एक लेख्न समर्पित छलेखक कसरी व्यक्तिको जन्म हुन्छ।
मेरो उपन्यासहरूमा दुवै आविष्कार र ज्ञात परिदृश्यहरू, मेरो लागि पूर्ण वास्तविक छन्, म तिनीहरूमा बस्छु र म तिनीहरूमा सर्छु। यद्यपि जब म कुनै ज्ञात शहरको कुरा गर्दछु म यसलाई मेरो अनुभवको छलको माध्यमबाट दिन्छु र यो शहरले अरूलाई चिनेको भन्दा फरक छ।
लेखन जीवित छ। बैठक यात्रा गर्दैछ। सम्झनाको लागि। कल्पना द्वारा। एक दिन हामीले यात्रा गरेको भौगोलिक माध्यमबाट।
१० कार्यहरू र उनीहरूको रचनात्मक प्रक्रिया
स्टॉकहोम मा कांग्रेस
विचार मेरो उपस्थितिबाट ए मा आयो बैंकिंग कांग्रेस, एक वैज्ञानिक सम्मेलन मा उपन्यास रूपान्तरण किनभने यो मेरो लागि लाभ र घाटा आंकडा भन्दा अधिक रोचक देखिन्छ।
म अन्तर्गत उपन्यास लेखें स्विडेन ले मलाई ल्याएको मनमोहक आश्चर्य को प्रभाव: स्कान्डिनेभियाई परिदृश्य (पानी, जsts्गल, तालहरू) ले मलाई मोहित गर्यो, म चकित भए। र त्यसपछि जीवनको स्वतन्त्रता।
नदीले हामीलाई लिन्छ
Ir० को गर्मीमा हामी बाइक गिरोहको साथ जान्थ्यौं ट्यागस नदीमा नुहाउनुहोस्। एउटा राम्रो दिन, जब हामी नुहाउन जान्थ्यौं, तब हामीले पर्कवेट नदी पार गर्यौं, जहाँबाट वर्षौंपछि यो देखा पर्नेछ नदीले हामीलाई लिन्छ.
उपन्यास लेख्नुहोस् मलाई नौ बर्ष लाग्यो किनकि धेरै पेशा बाहेक मैले आफूलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि मैले आफूलाई ती ठाउँहरू घुम्न, ट्यागस नदी खोलामा लात हाल्ने, गाँचेरोको पथमा समर्पित गरें।
लेख्न मलाई १ years वर्ष लाग्यो अक्टुबर, अक्टुबर। ती सबै बर्षहरूमा मैले पत्ता लगाए कि यो एक विश्व उपन्यास हो। जब मैले यो समाप्त गरें, कागजहरूको स्ट्याक, मेरो द्वारा टाइप गरिएको र जुन मसँग अझै छ, एक मिटर दश इंच लामो थियो।
मेरा सबै उपन्यासहरू मध्ये केवल एक, Etruscan मुस्कान, म ठ्याक्कै दिन, जुन क्षणमा यो जन्म भएको थियो र घटना यो हो कि यो प्रेरित गर्न सक्छ। मेरो नाति को जन्म त्यो सानो प्राणीबाट प्रेरित भएको उपन्यास साहित्यिक घटना भयो।
यो उपन्यास मेरो पढेकोबाट जन्मेको हो सफो कविताहरूविशेष गरी निराश युवकको तस्विर जसले आफूलाई माया गर्नेलाई माया नगरेकोले आफूलाई समुद्रमा फालिदिन्छ।
यो चालीस बर्ष भन्दा बढी परिपक्व एक उपन्यास हो किनभने यो छ Aranjuez को उपन्यास। म धेरै पहिले यो लेख्न चाहन्थें, तर यो एक युवा लेखकका लागि उपन्यास होइन।
समलि .्गी प्रेमी सबै माथि छ सामान्य स्वतन्त्रताको पुकार र विशेष गरी यौन स्वतन्त्रताको। यो रहस्यको एक राम्रो उदाहरण हो, सृष्टि को अकल्पनीय अंश।
मैले फ्रान्सेली लाइब्रेटिनको हिसाबले भाषाको धेरै ध्यान दिएँ, मैले कथित तथ्यहरूको कठोरताको लागि एक उत्तम भाषाको क्षतिपूर्ति दिन विशेष ध्यान दिएँ। यो मन पराउनुहोस् वा छैन कोही पनि अश्‍लील लाग्न सक्दैन.
को कथाहरू de पृष्ठभूमिमा समुद्र तिनीहरू "अनुवाद" दिन को लागी योजना बनाउँछन्, मानव प्रकारहरुमा, हामी विभिन्न समुद्रहरु संग संबद्ध peculiarities को।
यी लाइनहरु लेख्ने मेरो दृष्टिकोण त्यो हो सानो केटा जो समुद्री किनारमा खेल्दै बालुवामा मोती खोल भेट्टाउँछन् र आमालाई दगुर्दै दगुर्दै उनको नम्र धन प्रस्ताव गर्दछन्।
एकल एकलका लागि क्वार्टेट
हामी विचारको उपन्यास वा काल्पनिक निबन्ध, नैतिक कल्पित कथा वा दार्शनिक कथाको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। जे भए पनि यसको मूल्यमान्यताप्रति अविश्वसनीय विश्वको सामना गर्नुपर्दा एक उत्तम समाजको उद्दरण यो निस्सन्देह केंद्रीय अक्ष हो।
स्रोत: जोस लुइस सम्पेड्रो संघका साथीहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » जोसे लुइस साम्पेड्रो। उनका वाक्यांशहरू मार्फत उनका कामहरूको समीक्षा
क्युवाली साहित्यका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू